MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE BULLMASADOR IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Bullmasador iyo Sawirro
Bullmastiff / Labrador Eey cunugga isku dhafan ee isku dhafan
Cody the brown brindle Bullmasador (Bullmastiff / Labrador Retriever Hybrid Dog) da'da 3 sano jir— Hooyadiis waxay ahayd brindle Bullmastiff aabihiisna wuxuu ahaa a shukulaatada . '
Bullmasador ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Bullmastiff iyo Labrador dib u habeyn . Habka ugu fiican ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah in laga fiiriyo dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha lagu arko nooc kasta oo ka mid ah noocyada isku-dhafan. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Bullmasador
Diiwaangeliyuhu Nooca Diiwaanka = Bullmassador
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Bullmassador
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Bullmasador
Cody the brown brindle Bullmasador (Bullmastiff / Labrador Retriever mix breed dog) at 3 sano jir
Bruiser the Bullmasador (madow Lab / Bullmastiff mix) markuu jiro 6 toddobaad— 'Isagu waa kubad weyn oo tamar ah waxaanan runtii arkaa astaamaha Shaybaarka ee ka soo baxaya isaga-wuxuu jecel yahay daawashada shimbiraha iyo baacsiga cayayaanka! Qoloftiisu waxay ku bilaabatay sidii waxoogaa yeeris ah laakiin waayadan dambe aad bay u qoto dheer tahay. Waan ogahay inuu si aad ah noo ilaalin doono maxaa yeelay markuu sanduuqa ku jirin wuxuu jiifaa jidka albaabkeena hore. Waa ninkeennii yaraa. '
Bruiser the Bullmasador (madow Lab / Bullmastiff mix) eey yar oo jirta 4 bilood
Waa kan Bruiser oo 2 jir ah. Isagu waa eey aad u jecel oo jecel cibaadada uu la ciyaaro Kong-kiisa. Waxyaabaha uu jecel yahay inuu sameeyo ayaa ah inuu ku salaaxo dhabtaada-wuxuu ku tusayaa miisaanka 82 rodol! Wuxuu leeyahay shaqsiyad weyn wuxuuna doonayaa inuu si joogto ah u ciyaaro. Isagu aad buu u ilaaliyaa gurigeenna — hubaal wuu kula soo socodsiin doonaa marka qof ku soo dhowaado. Ma qiyaasi kari laheen eey ka macaan, farxad badan oo xitaa waxaan baranay inaan iska indhatiro kulaylka. Hubbygeygu wuxuu daawanayaa Cesar diin ahaan-wuxuu u maleynayaa '' CHHHH '' inay ku fiican tahay in eeyaha laga joojiyo wax aysan sameyn karin.
Stella eeyaha madow ee Bullmasador markay 9 toddobaad jirsatay (Bullmastiff / Labrador Retriever ey hybrid)
Stella eyga madow ee Bullmasador markay 13 toddobaad jirsatay (Bullmastiff / Labrador Retriever ey hybrid)
jack russell terrier pomeranian mix puppy oo isqaba yar
feeryahan buluug heeler ah oo la isku qaso eeyo
shaqaale madow iyo cadaan Mareykan ah terorder terreer
sida weyn waa Pyrenees weyn